Bottle Flip 3D 1.29 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.29 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Bottle Flip 3D
Bottle Flip 3D ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်ကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Arcade ဂိမ်း Bottle သ Flip 3D အတွက်ပလပ်စတစ်ပုလင်းလှန်ရန်ရှိသည်! ပုလင်းခုန်သို့မဟုတ်ပင်နှစ်ဆလှန်လုပ်ပါ။ ဘယ်လိုလဲ? ရုံပိုင်ခွင့်ယခုအချိန်တွင်မျက်နှာပြင်ကိုထိပုတ်ပါနဲ့ခုန်!
စင်ပေါ်, စားပွဲ, ကုလားထိုင်, ဆိုဖာ, ပင် subwoofer: ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းများ, အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးပေါ်ခုန် Explore! သင့်ရဲ့သွက်လက်ဆုံးမသှနျ, ညှိနှိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း, ခုန်၏ခွန်အားနှင့်အကွာအဝေးကိုထိန်းချုပ်။ နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ - ကသင် finish ကိုလိုင်းရနှင့်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်နေသောကြောင့်မှန်ကန်စွာအကွာအဝေးတွက်ချက်!
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဆင့်ဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောအတားအဆီး, သင်၏စံပြလှန်ပေးသည် - Bottle သ Flip 3D နှင့်တကွသင်ပျင်းခံရဘယ်တော့မှမည်! ခံစားကြည့်ပါ!
- ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ, ညှိနှိုင်းခြင်း, ပျော်စရာ - ဤအသစ်တခု Arcade ဂိမ်း Bottle သ Flip 3D ပါ!
- တစ်ဦးပလတ်စတစ်ပုလင်း Flip - ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းများ-အဆင့်ဆင့်လေ့လာစူးစမ်း။
- 3D သင်တို့အပေါ်မှာမူတည်သည့် Bottle သ Flip အနိုင်ရတဲ့, လက်ျာယခုအချိန်တွင်နှင့်ခုန်မှာ screen ကိုထိပုတ်ပါ!
- သင်ကပုလင်းနဲ့ပေါက်လွယ်ကူသည်ထင်ပါသလား ထို့နောက်သူကစမ်းကြည့်ပါ!
- အဆိုပါပျော်စရာပဲစတင် - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဆင့်ဆင့်နှင့်လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုအဘယ်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်မည်နည်း
VIP Access ကို3ရက်အခမဲ့အစမ်းအပြီး $ 5,99 များအတွက်အပတ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းပေးထားပါတယ်။3ရှားပါးပုလင်း, ရရှိခဲ့ပြီး 200% ကျောက်မျက်, သီးသန့် VIP ဂိမ်း mode ကိုလူအပေါင်းတို့ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှား: ဤကြေးပေးသွင်းဝယ်ယူအပေါ်သို့, သင်ချက်ချင်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူဘယ်မှာသက်ဆိုင်သောသောထုတ်ဝေဖို့စာရင်းသွင်းခြင်းဝယ်ယူသည်သည့်အခါတစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းကာလမဆိုအသုံးမပြုတဲ့အဘို့ကိုကမ်းလှမ်းသည်မှန်လျှင်, ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ဒါကတစ်ခု Auto-ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲကြေးပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါငွေပေးချေဝယ်ယူအတည်ပြုချက်ကိုအပြီးသင်၏ Google Play စအကောင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။ သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသငျသညျကိုအနည်းဆုံး 24 နာရီကာလကြီးစွန်းရှေ့မှာကို turn off မဟုတ်လျှင်ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏။ သင့်အကောင့်အဖြစ်ကောင်းစွာသက်တမ်းတိုးဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကခရီးစဉ်: http://tastypill.com/privacypolicy
Bottle Flip 3D အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bottle Flip 3D အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Bottle Flip 3D အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Bottle Flip 3D ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bottle Flip 3D အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.29
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://tastypill.com/privacypolicy
လက်မှတ် SHA1: F8:BF:0E:CD:1E:3C:0C:7C:75:A0:07:CF:7F:58:02:B6:53:86:F4:D9
Bottle Flip 3D APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ